Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ကွဲကျသွားသော ထမင်းစားပွဲမှန်သည် ပို၍ ချွန်မြသည်.... (သို့) ခံစားချက်စစ်စစ်များ
ကွဲကျသွားသော ထမင်းစားပွဲမှန်သည် ပို၍ ချွန်မြသည်.... (သို့) ခံစားချက်စစ်စစ်များ
ကွဲကျသွားသော ထမင်းစားပွဲမှန်သည် ပို၍ ချွန်မြသည်.... တဲ့..
ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ညီပေါက်ပေါက်(ရေတမာ)က ပေးပြီး သူကိုယ်တိုင် အစပြုခဲ့တဲ့ ခံစားချက် တခုပါ။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ ကျနော့်ကို အများကြီး ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ကျနော့်ရဲ့ မကြာခဏ ထွက်တတ်တဲ့ ဒေါသစိတ် တချို့ကြောင့် အဲဒီ ထမင်းစား စားပွဲ မှန် ကွဲကျ သွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကလဲ မှတ်မှတ်ရရ နေ့ပေါ့ဗျာ။ ခုထိ အမှတ်တရအနေနဲ့ ထမင်းစား စားပွဲကို မှန် ပြန်မထည့်ပဲ နောက်ထပ် စားပွဲ တလုံးကို အပေါ်ကနေ ထပ်ထည့်ပြီး မောင်နှမတွေ ထမင်းစားနေကြတုန်းပါ။
ဒီပိုစ့်လေးကို တင်ပေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။ အသက် (၂၀)ကျော်တဲ့ထိ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူးပဲနဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာ စာရေးရင်း ခင်မင်ရင်းနှီးရာကနေ ညီအကို မောင်နှမတွေ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ချစ်ခင်သွားခဲ့တာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ တခါတလေ လူတယောက်က အပြင်ပန်းခဏ ကြည့်ရုံနဲ့ ကောင်းမကောင်း တခါတည်း ဆုံးဖြတ်လို့ ရပေမယ့် တခါတလေ ကြတော့ တကယ်လက်တွေ့ ကျကျ ပေါင်းကြည့်မှ ခရီးလမ်းတခုကို တူတူလျှောက်ဖြစ် မလျှောက်ဖြစ် သိနိုင်ပါတယ်။ ခုလက်ရှိ ကျနော်တို့ ညီအကိုမောင်နှမတွေက ကိုယ့် လမ်း ကိုယ်လျှောက် နေကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း တူ တဲ့တူတွေ ဖြစ်လို့ အကောင်းအဆိုး ကိုဝေမျှပြီး နေနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်တို့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ရေးတဲ့စာကို ဖတ်ပြီးရင်တော့ စိတ်ထဲမှာ တခုခု ခံစားရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒုတိယ အကြောင်းအရာကတော့ ဘလော့ပေါ်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စာမရေးဖြစ်သေးပေမယ့် ကျနော်တို့တွေ မေးလ်နဲ့ အပြန်အလှန် ပိုစ့်တွေ ရေး၊ဟာသတွေ ပြောပြီး နစ်နစ်နာနာ ကော့မန့်တွေ ပေးပြီး တနေ့တာ အပန်းဖြေကြပါတယ်။ ဒီလူတွေ အိမ်မှာ မတွေ့ရဘူးလားဆိုတော့ ညနေထမင်းစားရင် စုံနေတာပဲ။ ခု ဘလော့ပေါ်မှာ ပျောက်နေတာ ကြာတဲ့သူတွေရဲ့ အရေးအသားတွေ ကို တခါတည်း မြည်းလို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွဲကျသွားသော ထမင်းစားပွဲမှန်သည် ပို၍ ချွန်မြသည်....
ဒီနေ့ဆို အလုပ်ချိန် သိပ်ကြာသည်။
ကား အရမ်းရှုပ်သည်။ ရထား သိပ်နှေးသည်။
လမ်းများ ရှည်လျားသည်။ ဓါတ်လှေခါးများ နှေးလွန်းသည်။
ဖိနပ်သံ ၉ ချက်ပြည့်သည့်အချိန် အိမ်တံခါးပိတ်မည်။
“မနက်ကတည်းက ထမင်းကို မစားရသေးဘူး”
“အားဘွား” “အကိုရေ”တို့ တိတ်တိတ်လေး ဝင်ဝင်ပုန်းတတ်ကြသေးသည်။
“ကလေး ဒါလေး ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ပြပေးပါ့ဦး”
“မလာခဲ့ကြနဲ့၊ ဒါပဲ ချက်မှာနော်”
ချိုချိုလွင်လွင် ဂစ်တာသံတွေ ညည်းတဲ့အခါ ပင်ပန်းခြင်းများ ကွာကြတတ်သည်။
“လီဗျောင်ဟွန်း နဲ့တူတယ်နော် ဟိဟိ”
“ဝတ်ပြန်ပြီ ဒါကြီးကို” တို့စူစူပုပ်ပုပ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါ အိမ်ရှေ့ရောက်၏။
“သိပ်ချီးမပေါက်နဲ့ ရော့ ဟင်းထည့်၊ ဒါ စပန်းနှစ်ဟင်းချို သံဓါတ်ကောင်းတယ် ရော့ မမစား”
“ဒါက ဒါနဲ့ တွဲစားရတယ်”
“ညီ့အတွက် ကြော်ထားတာ”တို့ မနာလိုဖြစ်လျှင် မသိချင်ဟန်ဆောင်နေပါ။
“ဟန်းးးးး တံတွေးတွေ ပန်းကန်ထဲဝင်ကုန်ပြီ”
“မမဖို့ ဒိုးလောက် ဟမ်!!”
“ပြီးပြီလား ထားခဲ့လေ ဆေးပြီးရင် ပန်းကန်စင်ပေါ်”
“လီဗျောင်ဟွန်း မြန်မြန်စား မြေပြိုနေပြီ” အစပျိုးလျှင် တခြားကမ္ဘာ့ခြမ်း၌ နေထွက်ပါသည်။
တံတားအောက်က အိပ်ယာလူစုံလျှင် ကိုကိုအလုပ်စပြီ။ ဘုတ်အီးစူပုပ်လျှင် ကစားပွဲ စပြီ။ မြည်တွန်တောက်တီးသံကြားလျှင် အကြီးကောင် ကွန်ပြုတာပြင်ပြီ။ တောက်ခေါက်သံကြားလျှင် ဘောပွဲစပြီ။ အကိုကြီး ဟန်ရေးပြလျှင် ရုပ်ရှင်စပြီ။ ဆူဆန်စကားပြောလျှင် ကိုကိုအိပ်ပြီ။ ဂစ်တာသံကြားလျှင် နားပိတ်ထားကြပါကုန်။
“ဟိတ်ကောင်တွေ အလယ်လမ်းမှာလာကူဦး၊ အားးးးး သေပါပြီ”
“ဟား ဟား ဟား ဟား”ဟု ရီရန် မီတာခအလုံအလောက်ရှိပါစ။
ထိုသို့ အပြောင်အပျက်ပြောလျှင် “သွားလိုက်တော့ နင်သွားလိုက်တော့”ဟု ပြန်အပြောခံရပါမည်။ သူတို့ထံတွင် မေတ္တာအလုံအလောက်ရှိကြောင်း ကွမ်းတရာညှက်ခန့် ကြာသည်အထိ နားသောတဆင်ကြကြရပေမည်။ ပြောရတာမောလျှင် ဘီယာသောက်ချင်သောက်မည်။ ဝိုင်ဖောက်လျှင် ဖောက်မည်။ ဒီအတွက် သောကမရောက်ပါနှင့်။
ညတကာတို့ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားပြီးလျှင် မနက်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ အလင်းရောင်ဖျော့ဖျော့သည် အိပ်တန်းတက်ရန် ရောက်လာသလို၊ နေမွန်းတည့်သည်လည်း ဆူဆူညံညံ တွန်တတ်သေးသည်။
“မထကြသေးဘူးလား၊ လုပ်စားမှာ ကိုင်စားမှာလား”
“ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ၊ ၁၁ နာရီ အစောကြီး ရှိသေးတယ်”
“ထမင်းကြော်ထားတယ်၊ ကော်ပြန့်ရှိတယ်၊ အေး မကျန်ရင် စိတ်မကောက်နဲ့နော်၊ မြန်မြန်လာစား”
“ချီးပေါက်ပြန်ပြီ” “ဘုရားအရင်မကပ်ဘူး ကိုယ့်ဗိုက်ထဲပဲ ထည့်နေ”
ဤအရာ၌ နာမဝိသေသနအများအပြားရှိသည်။ ပျော်ရွင်ခြင်း၊ ကြည်နှုးခြင်း၊ အံသြခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်လေခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ထို့အတူ မျက်ရည်၊ မေတ္တာ၊ လူသားဆန်မှု၊ အလုပ်၊ တာဝန် တကျောင်းတဂါထာ ဖွဲ့တည်သည်။ ဘဏ်စာရွက်သည် မျက်ရည်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသလို၊ မီးတပွင့်သည်လည်း မျက်ရည်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော မစ္ဆရိယစိတ်ရှိသလို ဂရုဏာနှင့် ယှဉ်သော ဒေါသရှိတတ်ပြန်သည်။ ဒုတိယဘုရားသခင် ဝင်မရှုပ်လျှင် ကောင်းသော်လည်း၊ ခဏခဏ ဝင်ဝင်ရှုပ်လျှင် မကောင်း။ ကြာလေရိုးလေ ဖြစ်လျှင် ကြာရိုးစွပ်ပြုတ်သောက်သည်က ကောင်းမည်ထင်သည်။ လိုအင်မပြည့်ဝခြင်းအတွက် မလိုအပ်ခြင်းများ ပြည့်ဝလာမလား။
ဒီနေ့ဆို ကျောင်းက ပြန်လာတာ နောက်ကျသည်။ ခေါင်းက ကိုက်သည်။ ကျောင်းတွင် အဆင်မပြေ ဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေသည်မှာ ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ် အဆင်မပြေချင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကျောင်းခန်းတွင်းရသော အနံ့အသက်များသည် ကိုယ့်ကို ဒေါသဖြစ်စေသည်။ အာရုံထဲကို တန်းကနဲ တန်းဝင်လာသည်။ ကိုယ် မခံစားနိုင်သော အနံ့အသက်များကြောင့် ကိုယ် မြင်သမျှ အရာအားလုံးသည် ဒေါသကို ဖြစ်စေသည်။
ဒေါသသည် အတန်းတွင်းသို့ ကူးစက်သည်။ အတန်းတွင် အမှိုက်များ ပွနေသည်။ နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေး မလုပ်သည့် စာသင်ခန်းကို ကြည့်ရသည်မှာ အကြော်သည် မီးဖိုနှင့် တူနေလေသည်။ မှန်များသည် သည်လဲ ပြောင်လက်တောက်ပမှု မရှိသလို ကိုယ့်အမြင်များလည်း မကြည်တော့။
ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ စာရွက်တွေ အများကြီး ထုတ်မိသည်။ အခန်းပြင်မှာကပ်သည်။ အခန်းတွင်းမှာ ကပ်သည်။ ရီစက်ရှင်တွင်ပေးသည်။ ဘာမှန်းမသိဒေါသထွက်သည်။ စိတ်သည် အိမ်ပြန်ချင်သည်ကိုသာ သိနေသည်။ ဆရာမဝင်လာပြီး ဖြေရှင်းပေးသည်။ ချိုချိုသာသာနှင့် ကြောက်လန့်တကြား ပြောနေရှာသော ဆရာမကိုပင် ရန်လုပ်သေးသည်။ ကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်။ ကိုယ်မှန်တာလုပ်သည်ဟု ခံစားရသည်။ သို့သော် ကိုယ့် ဒေါသ ပိုလျှင် အပြစ်ဖြစ်စေသည်။
အချိန်ကို ကြည့်သည်။ အချိန်တန်လျှင် ကားပေါ်မှာ ငိုက်ရဖို့အတွက်ပျော်သည်။ အိမ်ပြန်ရမည်ကို ပျော်သည်။ အိမ်ရောက်လျှင် အိပ်မည်ဟု အားတင်ထားသည်။ ခေါင်းကို ခဏ အနားပေးမည်ဟု စိတ်ကူးနှင့်ရူးလာသည်။ အိမ်ရောက်တော့ နေစောင်းနေပြီး။
အဝတ်အစားလဲပြီး အခန်းတံခါးကိုပိတ် ကျိတ်မှိတ်အိပ်ဖို့ကြံစည်သည်။ ၁၅ မိနစ် ၊ မိနစ်(၂၀)........ လူးလဲထသည်။ ကျောင်းစာတွေ ခေါင်းထဲရောက်သည်။ အလုပ်အကြောင်းခေါင်းထဲ ရောက်သည်။ စိုးရိမ်မှုတွေ ခေါင်းထဲရောက်သည်။ အိမ်အကြောင်းခေါင်းထဲရောက်သည်။ ကွန်ပြူတာဖွင့် စာလုပ်မိသည်။ နာရီကိုကြည့်သည်။ သည်အချိန် ဘယ်သူအလုပ်ဆင်းလောက်ပြီး။ သည်နေ့ ဘယ်သူလာလောက်သည်။
စာဆက်လုပ်သည်။ စိတ်ကဟင်းချက်နေပြီး။ ဒွိဟက ဖြစ်သေးသည်။ ဒီနေ့ ဘယ်သူမှ မလာလောက်ဘူး။ မချက်တော့ဘူး။ နားလိုက်တော့မယ်။ ဟင်.... ငါမချက်ထားရင် သူတို့လာရင် မစားရတော့ပဲနေမှာ...။ ငါဖုန်းဆက်မေးရင်လဲ သူတို့ငါ့ကိုအားနာကျတော့မယ်။ မဖြစ်ပါဘူး။ ကုန်းရုန်းထ။ အာရုံထဲပေါ်တဲ့ဟင်းကို ချက်သည်။ သူတို့ ကို စားစေချင်သည်။ သူတို့ကိုလာစေချင်သည်။
ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက် ကြင်နာလွန်းတဲ့ အကိုကြီးကိုမျှော်သည်။ အချိန်တန် အိမ်ပြန်မရောက်သေးလျင် အလိုလိုနေရင်းဒေါသထွက်နေပြီး။ သူ့ကို ထမင်းစားစောင့်နေရတာ။ ဗိုက်ကဆာနေပြီး။
အဝေးကနေ လာပြီး ကိုယ်အော်ငေါက်တာကိုလာ ခံတဲ့ ညီကို မျှော်သည်။ နေကောင်းသလား။ ခေါင်းကိုက်သလား။ ဖုန်းမခေါ်ချင်။ လူကိုသာမြင်ချင်သည်။
ကိုယ့် ကို သတိတရ မုန့်ဝယ်ဝယ်လာတဲ့ ညီမကို မျှော်သည်။ သူဘယ်များသဝေထိုးနေသလဲ။ ထမင်းရောမှန်မှန်စားသလား။ gym ပဲသွားနေသလား။ ပိုက်ဆံတွေ ပိုကုန်နေပြီးလား။
ကိုယ့်အိမ်မှာ တတွတ်တွတ်နဲ့ တအိမ်လုံးညံအောင် ချီးပေါက်တတ်သော ညီကို မျှော်သည်။ တပတ်တခါ ပုံမှန်ရောက်ပေမယ့် နေ့တိုင်းမျှော်မိသည်။ သူရှိလျှင် အိမ်စည်သည်။ ပျော်ကြသည်။
အချစ်တွက် တယောက်တည်း ကျိတ်ခံစားနေတဲ့ အကိုကြီးကိုလဲ အမြဲမျှော်သည်။
တနလာင်္နေ့မှသောကြာနေထိ မန်နေဂျာ အုပ်ချုပ်မှု အောက်ရောက်ပြီး စနေတနင်္ဂနွေတွင် မိန်းမ အုပ်ချုပ်မှုအောက် ရောက်နေတတ်သော ကလေးအဖေကို မျှော်သည်။ သူလာရင် ထိန်းချုပ်ထားသမျှ အိမ်မှာ ပွင့်အံ ထွက်သဖြင့် ပြောသမျှ ရယ်ရသည်။ သူလဲ မိန်းမနှင့် စိတ်ကောက်လျှင် အိမ်ရောက်လာတတ်သည်။ ကျနော်တို့ အဖို့ နေတိုင်း စိတ်ကောက်ဖို့ အတွက် ဆုတောင်းရမလိုပင်။
ကိုယ့်နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး တူတူနေနေတဲ့ ထမင်း အမြဲမစားရဘူး ညည်းတဲ့ ညီကိုမျှော်သည်။ ဘယ်မှာ ဘာစားပြီး ဘယ်လိုအိပ်နေမလဲ အမြဲ ပူနေမိသည်။
ကိုယ့် ဆီကို တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် ရောက်လာတတ်သည့် ညီကိုလဲ မျှော်မိသည်။ စကားနည်းပေမယ့် ကိုးရီးယားမင်းသားနဲ့ တူတာကို ထပ်တလဲလဲ ပြောသည့် ပျင်းလျှင်အိမ်ရောက်လာသည့် ညီကို မျှော်သည်။ ခုတော့ အိမ်ပေါ် အပြီးရောက်နေပြီး။
ကိုယ့် အချစ်ဆုံးတဲ့( အားလုံးက မသိမသာ သိသိသာသာဝိုင်းပြောကြတာ.. ကျေနပ်၍မဟုတ်)။ အပလီဆုံး ညီ ကိုထပ်မျှော်သည်။ လာရင် အကိုဘာဟင်း ချက်ချက် ကောင်းတယ်ပြောပြီး ထမင်းစားမည်။ ပလီမည်။ သူအိမ်ရောက်လာလျှင် ဝိုင်းစမည်။ ဝိုင်းကောင်းမည်။ အလှူပေး၍ သထေးဖြစ်မည့်သူထဲတွင် သူပါသည်။
သာလိကာ ညီမတစ်ယောက်ရှိသည်။ မမျှော်လျှင်ပေါ်ပေါ်လာတတ်သည်။ မထတမ်း ပြောပြီး မနားတမ်းစားသည်။ သာလိကာနှင့် ချီးပေါက်ကောင်တို့ တွေလျှင် အိမ်စည်ပြီး။
ရီးစားနဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ ဗလတောင့်တောင့် ညီ အိမ်အပြန်နောက်ကျတာကို မျှော်သည်။ ဘာများစား၊ ဘယ်ကိုသွားပြီး ဘာကြောင့်နောက်ကျသလဲစိတ်ပူသည်။ သေအောင်သတ်. ဘယ်တော့မှာ သူ့ကို မမေးပါ။ စိတ်က မျှော်သည်။
ကိုယ့်နဲ့အတူ လူမျှော်တတ်တဲ့ အမတစ်ယောက်ရှိသည်။ လူစုံလျှင် ပျော်နေတတ်ပြီး အကြောင်းရှာ ရယ်ရသည်။ အသံကျယ်လာသည်။ ကွမ်းထုတ်တွေပျောက်သည်။ အလုပ်မှ ရသမျှ လစာကို တခါတည်းလှူသည်။ မူးလာလျှင် တစ်ယောက်တည်း အချစ်ပြိုင်နေပြန်သည်။
တနေ့တာ ကုန်ဆုံးလို့ ညနေရောက်ရာလျှင် ကိုယ့်စိတ်အစဉ်သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
နေ့တိုင်း ဒီအတိုင်း ပင်.။
ကိုယ်က အကြီးဖြစ်နေခဲ့လို့လားတော့မသိ။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ရှိတဲ့ သူအားလုံးကို ကလေးလို့ပင်မြင်သည်။
ကိုယ်က ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး။ ပျော်သလားမေးပါ။ ကိုယ်ပျော်တဲ့ အချိန်ကို မေးရင်း သောကြာ စနေ ပါ။ တနင်္ဂနွေညနေနှင့် ကျန်နေ့များကိုမုန်းပါသည်။
ကွဲကျသွာသော ထမင်းစားစာပွဲမှန်သည် ပို၍ချွန်မြသည်။
ထိုမှန်ထက် ကိုယ်သည် ပို၍ စူးရှနေသည် ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်သည်။
ဒီကနေ့မှ မဟုတ် ..
ရုံးတက်ရသော အချိန်တိုင်း နာရီတွေ အကုန်နှေးသည် ..
ရုံးရောက်သည်နှင့် ကွန်ပျူတာဖွင့်မည် .. လူမရှိလျှင် မရှိသလို လစ်လျှင်လစ်သလို မလစ်လျှင်လည်း မလစ်သလို အွန်လိုင်းတက်သည် .. ဖေ့ဘွတ်ဝင်သည် .. ချက်သည် .. (မှတ်ချက် - အလုပ်တော့ အကြွေးမရှိပါ .. အကုန်ပြီး၏)
မနက် အလန်းမည်လျှင် ပြန်ပိတ်သည် .. ပြန်အိပ်သည် .. ၁၅ မိနစ် ရသေးသည် .. ၁၅မိနစ်ပြည့်လျှင် အလန်းထပ်မြည်သည် .. ထပ်ပိတ်သည် .. ထပ်အိပ်သည်က များသည် .. နောက်ဆုံးအချိန်တွင် လူးလဲထသည် .. မျက်စိနှစ်လုံး မပွင့်ပဲ ရေချိုးခန်းဝင်သည် ..
သို့သော် မျက်နှာသစ် သွားတိုက်မှ စ၍ မနက်မိုးလင်း လုပ်စရာရှိသည်များကို တခါမှ မမေ့လျော့ .. (အကိုအကြီးဆုံးကို စောင်းပြောမှန်းသိအောင် ဒဲ့ပြောသည် .. :P) တော်ရုံတန်ရုံ ဒေါသထွက်လေ့မရှိ (အကိုလေးကို စောင်းပြောသလိုနဲ့ ဒဲ့ပြောသည် .. :P) တခါတရံတော့ စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်တတ်သည် ..
ဘယ်အချိန်တွေ စိတ်အခန့်မသင့်ဘူးလဲ .. ရုံးတွင် ပြန်မည်အားခဲထားကာမှ အလုပ်ပေါ်သည် .. ဟိုလူရစ် ဒီလူရစ် ခံရသည် .. ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်မရှင်းပဲ သူများပါ လာရှုပ်သည် .. ဒီလိုအချိန်ဆိုလည်း ဘုတ်အီးတို့ မျက်နှာဆူသည် .. ပုတ်သည် .. အလုပ်ကို ဆောင့်အောင့်လုပ်သည် .. :P
ခုတ်သည် .. မူးသည် .. ချုပ်သည် .. အသံမျိုးစုံကြားရမည် .. မာနာမူ ကို တသည် .. သူတို့ ဒိုတာ ခုတ်နေပြီ .. မိုးလင်းလည်း ခုတ်သည် .. မိုးချုပ်လည်းခုတ်သည် .. ဒိုတာကိုက်လို့ ပိန်သည် .. ဒိုတာသည်လည်း ခုခံအားကျသော ရောဂါတခုပေပင် .. (မှတ်ချက် .. တဖြည်းဖြည်းပိန်လာသူတဦးအား ရည်ညွှန်းသည် .. :D မမချိုနွယ်သည် ပိန်လျှင် မကြိုက် .. အားကိုးရမည့်သူမျိုးသာ လိုလားသည် .. :P)
အလုပ်ဆင်းလျှင် သဝေထိုးသည် .. တနေရာမဟုတ် တနေရာ .. ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနှင့် မိုးစုန်းစုန်းမချုပ်မချင်း မပြန် .. အိမ်စောင့်နတ် လက်မခံသောကြောင့် ..
ညနေဘက်ထမင်းစားလျော့သည် .. (မှတ်ချက် - ထမင်းတမျိုးတည်းသာ :P) ချီးပေါက်သူ ညီတယောက်နဲ့ ထမင်းစားသည် .. အပြန်လမ်းတွင် စိတ်ကောက်တိုင်းဆော့သည် .. အသားအမြန်ဖြူလာစေဖို့ ဆုတောင်းပါသည် .. :P ကိုရီးယားမင်းသားနှင့် မျက်မှန်တပ်ထားတာချင်းတူသည့် ညီတဦးရှိသေးသည် .. သူကတော့ ဘော်ဒီကို ညဘက်အိပ်ချိန်လျော့ခြင်းဖြင့်ထိန်းသည် .. (မှတ်ချက် - ညဘက်ဟုသာမှတ်ထားပါရန် .. နေ့ဘက် အိမ်သာထဲ ၀င်အိပ်သည်များမပါ ..)
အလွန်အေးသလိုထင်ရသည့် သူတဦးရှိသေးသည် .. ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနှင့် သဘောကောင်းလောက်သည်ဟုလည်း ထင်ရသေးသည် .. (မှတ်ချက် - ထင်ရခြင်းသာ .. မသေချာ :P) .. လာတာလည်း မသိလိုက်သလို ပျံတာလည်း မသိလိုက် ..
အကိုလတ်ဆိုသည်မှာ သူများဖုန်းပြောလျှင် နားတွေကွဲထွက်မည်ဟု အော်ငေါက်လေ့ရှိသည် .. ဒါကလည်း အရှက်ပြေမျှသာ .. သူလောက်တော့ မပြောနိုင်ဆိုတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်သည် .. ယခုအချိန်တွင် ထို အကိုလတ်ဆိုသူသည် .. ဗလတောင့်လာရေး ၀လာရေးအတွက် ကြိုးပန်းနေလေသည် ..
တခုအကြံပေးလိုသည်မှာ အမှန်တကယ်ဝလိုလျှင် လေကိုခြွေတာ သုံးစွဲပါရန် .. :P
တဦးတည်းသော အစ်မတယောက်ရှိသည် .. အသံတိုးသည် .. ကွမ်းစားလေ့မရှိ .. (၀ါးပဲဝါးသည် .. :P) ခုတော့ သူပျော်လေပြီ .. (အိပ်လို့ :P) တနေ့တာကုန်ဆုံးလို့ ညရောက်လာလျှင် မအိပ်ချင် .. မနက်ဆို မထချင် .. ဒါသည်လည်း ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက်နေခြင်းပင် .. မနက်ဖြန် ရုံးတက်ရမည် .. တော်သေးပြီ .. :D
ဒီနေ့ အလုပ်စဝင်တာ ၃ ရက်ရှိပီ၊
အလုပ် အရူပ်ဆုံးနြေ့ဖစ်ဟန် တူသည်၊ ရောက်တာ နဲ့ ဘော့စ်( ကုလားကြီး) က ခေါ်ပီး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ အမှတ်စင်( စာလုံးပေါင်း သီးခံပါ) နဲ့ ဘာလုပ် ဘာလုပ် လုပ်ခိုင်းသည်၊
ပထမ ဆုံးအလုပ် က စာသွားထည့်ရမည်၊ ဒီရောက်တာ ၃နှစ် ပြည့်တော့မည်၊ တခါမှ စာမထည့်ဖူး၊ အချစ်ကို အလွမ်းပြေ ဖုန်းဆက်ပြီး ( အိမ်တွင် ဖုန်းဆက်ရင် မောင်တွေ ရဲ့ ကလိတာ ကို မခံနိုင် သောကြောင့်) ပို့စ်ဘောက်စ် ရှာ မတွေ့သောကြောင့် ရောက်နေတဲ့ လမ်းကို ပြောပြပြီး ချွဲနွဲ့စွာ ရှာခိုင်းမိသည်၊ သူ ရှာလို့ မတွေ့ခင်ပင် ကိုယ်ဘာသာ ရှာတွေ့သွားသည်၊ စာတိုက်ပုံးထဲ အားပါးတရ စာ ၂စောင် ထိုးထည့်လိုက်သည်၊ အပြန် တလမ်းလုံးဖုန်းပြော လာသည် :P
အလုပ်ပြန်ရောက်တော့ သထေးက ဘာပြီးပလဲ မေးသည်၊ ဘာမှ မပြီးသေး အခုမှ စာထည့် ပြန်လာသည် ပြောသည်၊ အရပ်က ပုပါတယ် ဆို ခုံပေါ် တတ်ပီး တိုင်းကဒ် တွေ တက်ယူခိုင်းသည်၊ ၆ နာရီ ပြန်ရမည့် ကုလားမ ဒီနေ့ ပရင့်ထုတ်သော စာရွက်တပုံတခေါင်းကြီးနဲ့ မပြန်နိုင်ဖြစ်လို့ သနားပီး ကူလုပ်ပေးလိုက်သည်၊ ကုလားမ ၈ နာရီထိုးမှ ပြန်ရသည်၊ ဆူပုတ် ပွစိပြီးပြန်သွားသည်၊ ကိုယ် လဲ သူကို ကူနေသောကြောင့် ကိုယ့် အလုပ်တွေလဲ မပြီးပေ၊ ဘော့စ် က ထပ်မေးပြန်သည်၊ ဘာတွေ ပြီးပလဲလို့၊ ဘာမှ မပြီးသေး :P၊
မပြီးတာကို အကြောင်းပြလိုက်သည် ဘော့စ် ရေးထားသော အင်ဂလိ စာကို မဖတ်တတ်ပါလို့၊ သူ့မုတ်ဆိတ်မွေးများနှင့် တူအောင် တွန့်လိန် ကောက်ကွေးနေသော လက်ရေးကို ကြည့်ပြီး လက်ရေးအလွန်လှသော မျက်မှန် နဲ့ ညီရယ် အငယ်မ ရယ် သတိရသွားသည်၊ ရန်ဖြစ်စရာ ၊ စကားပြောစရာ လူ မရှိလို့ ပရင်တာ နဲ့ စကားပြောသည်၊ ရန်ဖြစ်သည်၊ ဆင်ကာပူ တွင် ကိုယ့်ထက် အင်တာနက် သုံးတာ ညံ့သော သူတွေ တွေ့သည်၊ ကိုယ် သိပ်ပျော်သည်၊
ကိုယ် အလုပ်လုပ်သော အင်တာနက် ဆိုင်တွင် ubuntu ရှိသည်၊ အဲ့သည် အတွက်လဲ ပျော်သည်၊ ကိုယ့် အရင် အလုပ်လုပ်သော ကလားမသည် ubuntu ကို မသိပေ၊ သူဖွင့်လိုက်တဲ့ စက်တိုင်း Window XP တက်မလာပဲ ubuntu ကြီးတတ်လာရင် စက်ပျက်သည်ဟု ပြောကာ နောက်စက် ပြောင်းခိုင်းသည်၊ ကိုယ် လုပ်ပေးလို့ ရသွားသော အခါ ကိုယ့် ကို ubuntu ကို မိတ်ဆက် ပေးသော ညီ တယောက်ကို သတိရသည်၊ ကျေးဇူးလဲ တင်သည်၊ ကိုယ် သူ့ထက် ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်မည်၊ သူချီးပေါက်တာ ပြန်ပေါက် နိုင်အောင်ကြိုးစားမည်၊
ကိုယ့်ဆိုင်တွင် အအေးအမျိုးအစား ၅၀ ၆၀ လောက် ရှိမည်၊ အအေးကြိုက်တတ်သော မောင် ကို သတိရရင်း ကိုယ်ပြန်ရင် သူ့အတွက် တဗူး ယူသွားဖို့ သတိရသည်၊သတိရတိုင်း တဗူး ယူ ယူ သောက်တာ ခနခန ရူရူ ပေါက်ချင်သည်၊ ရူရူ ပေါက်ချင်ရင် အပေါ်ထပ်ကို တက်ရသောကြောင့် လူစောင့်မရှိလို့ မသွားရပေ၊ ထို့ကြောင့် မလေးရှားမှ လာသော ရေသန့်ဘူးနဲ့ ကိုယ်လက်ဆေးသည်( ဟမ် ဘာမှ လဲ မဆိုင်ဘူး) :P
snack ထုတ်တွေ အများကြီး ရှိသောကြောင့် ခနခန သရေစာ အထုတ်လေးတွေ ဝယ် စားတတ်တဲ့ အကိုကြီးကိုသတိ ရမိသော်လည်း ကိုယ်မကြိုက်သော အရာတွေ ဖြစ်နေသောကြောင့် တခုမှ ယူ မစားမိပေ၊ ကိုယ်ကြိုက်သော အရည်တော့ ကိုယ့် ဆိုင်မှာ မရှိ၊ ဘေးဆိုင်က စားသောက်ဆိုင်မှာ ရှိနေတာတော့ တွေ့မိသည်၊
ပရိုးမိုးရှင်းလို့ ရေးထားတာ သေချာ ဖတ်ပီး ကိုယ်နဲ့ အကြိုက်တူတဲ့ တနေ့တနေ့ ဘာမှ မစားရသေးတဲ့ ညီ ကို သတိရသည်၊ ထမင်းစားသော အချိန် ကိုယ့် အိမ်ကို သတိရမိသည်၊
အလုပ်က မောပန်းပြန်လာတဲ့ အကိုကြီးက စာဖိုမူး ကြီးနဲ့ ရန်များဖြစ်နေမလား၊
ကိုယ့် ကို ဆရာလုပ် အော်ငေါက်တတ်သော အဝေးမှ ညီငယ်လေး ဒီနေ့ ရောက်နေလေ မလား၊
စားဖိုမူး ကြီးရော ဒီနေ့ ဘာဟင်းတွေ ချက်ပါလိမ့်၊
အငယ်မရော အားကစားပဲ သွားသလား လစ်တဲအင်ဒီယ ရောက်နေသလား၊
ညီညီ ဗလ ရော အခန်းထဲ ပြန်ရောက်ရင် ပြတင်းပေါက်တွေမှ ဖွင့်ထားပါ့မလား၊
တနေ့တနေ့ ဘာမှ မစားပဲ အိမ်သာထဲ အိပ်အိပ် နေတဲ့ ညီရော ရောက်နေလောက်ပလား၊ အိမ်မှာနေရတာ ပျင်းတယ် ဆိုတဲ့ ကိုရီးယား မင်းသားရော လာမှာလား၊
အိမ်ကို လွမ်းရင်း စင်းစားရင်း ထမင်းဘူးကို ဖွင့်လိုက်တာ နှမြောပြီးထည့်သွားတဲ့ ကြက်O ကြော် တွေ သိုးနေပါပေါ့လား........
၁၁ နာရီ ထိုးရင် ကိုယ်နဲ့ ဂျုတီ ချိန်းသော ကလားလေး ရောက်လာမည်၊ သူ့ကို ဘော့စ် ခိုင်းထားသော အလုပ်မျာကို ပြပီး နက်ဖြန် အတွက် ဒီ ညထဲက လုပ်ထားစရာတွေ ပြမည်၊ ကိုယ့် နဲ့ ရန်ဖြစ်ရသော ပရင်တာကြီး ကို ပြပြီး မသိတာတွေ မေးမည်၊ ကိုယ် အိမ်ပြန်ချင်နေပြီ စာရင်းတွေ အမြန်အပ် မပီးခဲ့တာတွေ ကို လမ်းမှာ ဖုန်းနဲ့ ပြောလာရင်း mrt ကို သူများတွေ လို ကယ်လီဖိုးနီးယား သွားစရာ မလိုအောင် အပြေး ကလေးသွားလိုက်မည်၊ ဘုရား....ဘုရား နောက်ဆုံးရထားမှီပါစေ၊ ရထားပေါ် ရောက်ရင် အိမ်ရောက်တော့မည်၊ အိမ် ရောက်ရင် လူ အစုံ တွေ့ချင်လိုက်တာ.........:)
ချုပ်လှချည့်လား ကွယ်ရို့ အဟေးဟေးးးးးး ငါ လဲ ချုပ်ဦးမှး)
ကျနော်.... ကျနော်သည် လောဘကြီးတတ်သူ တယောက် မဟုတ်။ ခြံနဲ့ ကားနဲ့ နေချင်လှသူလဲ မဟုတ် သူဌေးတယောက်လို မော်ကြွားချင်သူလဲ မဟုတ်.... ကျနော်သည် အပေါင်းအသင်း ခင်မင်တတ်သည်...
စင်ကာပူကိုရောက်တုန်းက သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဝေးလို့ တူတူလာတဲ့ လူအချင်းချင်းတောင် စကားတွေ သိပ်ပြောဖြစ်ကြခဲ့သည် မဟုတ် ( အလုပ်ရဖို့သာ အာရုံထားခဲ့ကြသည်) ခု လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန် ၂ နှစ်ကျော်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့ အရာတော်တော်များများ ကျနော့် blog ထဲမှာ ပြောခဲ့သလို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ။ အတိတ်သည် လက်ရှိ ပစ္စပ္ပုန် (မမပြာ ပြောသလို) နဲ့ မတူတော့..
ကျနော်မှာ အရင်က ခင်တွယ်စရာ အမေ၊အမ မိသာစုလေး ရှိခဲ့သည်။ အဝေးတနေရာ ရောက်နေတော့ ကျနော် ခင်တွယ် မြတ်နိုးသော မိသားစုရဲ့ အရသာကို တမ်းတတတ်ခဲ့သည်။ အခုဆို ကျနော် ချစ်သော မိသားစုနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် (မတူပါ) တူသော မိသားစု မောင်နှမ အသိုင်းအ၀န်းထဲ ကျနော် မထင်မှတ်ပဲ ရောက်လာခဲ့ရပြန်တယ်။ ကျနော်တို့ ညီအကို မောင်နှမတွေ စိတ်ချင်းပေါင်းလို့ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖေးမကူညီခဲ့သည်။ လိုတာဖြည့်၍ ပိုတာတော့ မလျှော့ခဲ့ပေ(အပြော၊ ချုပ်ခြင်းများကို ဆိုလိုသည်) ယခု ကျနော်တွင် ရောဂါတခု ရနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါက ကျနော်သည် သောကြာညတွင် ထို မောင်နှမများရှိရာသို့ မသွားပဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါသာဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်း ကျနော်သည် ဂိမ်းကို ၀ါသနာပါလှသည် မဟုတ်ပေ( အဟီး) ကျနော် ရောက်သွားလျှင် ကျနော်ပျော်သည် အရင်တုန်းက မိသားစုနဲ့ စကားပြောရသလို စိတ်ထဲမှာ ရှိသမျှ ကျနော်တို့ ပြောကြသည်။ ငယ်စဉ်တုန်းက ကလေးဘ၀ကနေ လက်ရှိအခြေအနေသာမက နောင်ဖြစ်လာမဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာအားလုံးကို ကျနော်တို့ ပြောကြသည်။ မိသားစုနဲ့ ထမင်းလက်စုံ မစားရတာ ကြာပြီဖြစ်သော ကျနော့်အဖို့ မောင်နှမများနဲ့ ထမင်းဟင်း တူတူစားရသည်ကိုက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရသာ.....
ထိုငြိမ်းချမ်းသောဂေဟာလေးထဲမှာ လူမျိုးစုံ စရိုက်စုံနဲ့ ချစ်ကြည်စွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအိမ်လေးထဲတွင် အနေအေးသော အကိုကြီးဆုံး ရှိသည်။ အနေအေးသလောက် ဂရုစိုက်လဲ အခံချင်ဆုံး၊ တီတီတာတာနဲ့ သူ့ကို လုပ်နေလျှင် သူ့ဘ၀မှာ ကျန်တာဘာမှ မလိုတော့သည် ပုံစံနဲ့ စကားလေးများ ဆူလာလို့ ကြားထဲက တခုခုနောက်လိုက်လျှင် အမှန်ထင်၍ ပါးစပ်လေး ဟနေတတ်သည့် အကိုကြီး... သူချစ်သော ညီငယ်မျောက်က တခုခုဆို သူ့ကို အမြဲ အနိုင်ယူနေသည်ကိုက အမြဲ ကျေနပ်အားကျပီး ပြုံးနေတတ်သူသာ.......
သူသည် မူးနေလျှင် တကိုယ်လုံး နီမြန်းကာ အိပ်ပျော်တတ်သည်။
အဟေးးးးး ထိုလှပတဲ့ ဂေဟာလေးထဲတွင် ယောကျာ်းများနဲ့ တန်းတူ ယှဉ်ပေါင်တန်းနိုင်သော အာဂမိန်းကလေးတယောက်လဲ ရှိနေပေသေးသည်။ မေးလိုက်လျှင် မသိတာများပေသည်။ အားနေလျှင် ကွန်ပြူတာတလုံးနဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကနေ မထသော တဦးတည်းသော အာဂ အမျိုးသမီးဖြစ်ပေသည်။ သူသည် ဗိုက်ဆာခြင်းအလျင်မရှိ သူ့အတွက် လိုအပ်သည်က ကျနော်တို့ ရှေးဘုရင်များလက်ထက်ကတည်းက သုံးစွဲလာသော ကွမ်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ စား၏ ၀ါး၏ ထွေး၏ ပြန်စား၏ ရေသောက်၏ စား၏ ၀ါး၏ ထွေး၏ နဲ့ သူ့ဘ၀လေးကို သူ ကျေနပ်စွာ ဖြတ်သန်းနေပါသည်။ ခုတော့ သူ အူဘွန်းတူ ဆိုတာကြီးကို သဘောကျနေပေသည်။ ရွာပြန်လျှင် ကျနော့် အဖိုး ဦးဘွန်းတူးကြီးနဲ့ လပ်ထပ်ပေးယုံသာ ရှိတော့သည်။ သူသည် မူးနေလျှင် သူ၏အချစ်ဆုံးများကို မှားပြောတတ်သည်။
ထိုသာယာတဲ့ ဂေဟာလေးထဲမှာ စိတ်ကြီးတတ်တဲ့ အကိုတယောက် ရှိနေသေးသည်။ သူသည် မိမိစိတ်ကို မိမိ ဘယ်တော့မှ ထိန်းချုပ်ဖို့ မစဉ်းစား ပေါက်ကွဲထွက်တတ်ဖို့သာ စဉ်းစားနေတတ်သည်။ သူ ပေါက်ကွဲနေလျှင် အလကားနေရင်း တရားခံ ဖြစ်သူမှာ အပေါ်ဆုံးက အကိုကြီးသာ ဖြစ်ပေသည်။ တခါတလေ သူတို့ စကားသံ မကြားရလျှင် မနေတတ်သော ကျနော့်အဖို့ ချွန်တိုးလေး လုပ်ပေးတတ်သည်။ ထိုအခါ သူတို့၏ ချီးပေါက်သံများကို ကျနော် ကြားရပါသည်။ ကျနော် ပျော်ပါသည်။ သူသည် ကျောင်းတွင်လဲ အငြိမ်မနေ ကော်ပလိန်းတွေ တက်နေကျဖြစ်ပါသည်။ ယခုသူ့၏ အမွေကို ဆက်ခံရန် ကျနော့်ချစ်သူက ကြံစည်နေပါသည်။ အဟေးး ခုတလော သူငြိမ်နေသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ အီကီစလီ လုပ်ချင်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ သူသည် မူးနေလျှင် သူများစကားပြောတာ နားထောင်ပြီး ဖော်လိုး လိုက်တတ်သည်။
ထိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဂေဟာလေးထဲတွင် လူပိန်သလောက် အကြံကြီးသော လူတယောက် ရှိနေပေသေးသည်။ သူသည် တော်ကီက ဂေါ်လီဆိုသလို သူ့ရဲ့ အပြောတွေနဲ့ ကောင်မလေးများကို ငြို့ယူဖမ်းစားတတ်သည်။ သူသည် အပြင်မှာ ပြန်လာလျှင် အလကားနေ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ ၀ူးးး ၀ူးး ၀ါးး ၀ါးး လုပ်ပြီး အခန်းထဲ တန်းဝင်တတ်သည်။ ညမိုးချုပ်လို့ ဂိမ်းဆော့လျှင် သူအမြဲ ရှုံးသည်က များသည် မရှုံးပဲ နေမလား ဂိမ်းဆော့ရင်း ဖုန်းပြော၍ ချုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဒီဇိုင်းပညာတွင် ကျွမ်းကျင်သလို နေရာချတတ်သည့်အရာတွင်လဲ ကျွမ်းကျင်လှပေသည်။ သူသည် မူးလာလျှင် သူများနဲ့ မတူပေ... ဘောလုံးသမားကောင်းတယောက်လို လျှောက်ပတ် ပြေးနေတတ်သည်။ သူ့ကို ဖမ်းမိဖို့ ဆိုသည်မှာ မလွယ်လှပေ......
ထိုခင်မင်မှုများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဂေဟာလေးထဲမှာ မျက်မှန်နဲ့ လူပြိုကြီး တယောက် ရှိသေးသည်။ သူသည် လူသာပြိုသာ စိတ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ မပြိုသေးပေ... ထွက်ကျလာသော စကားလုံးများသည် သာမန် သမီးရည်းစားများ ကြားမိလို့ကတော့ ကြွေသွားလောက်ပေသည်။ သူ့ဆီက သင်ယူစရာများကို သင်ယူရတတ်ပေသည်။ ရည်းစားမရှိ လူပြိုကြီး ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းများစွာထဲတွင် တခုက သူသည် အအိပ်မမှန်ခြင်းပင်... ညဆိုမအိပ်တတ်သလောက် နေ့လည်လောက်ထိ မထတတ်သော လူကြီးများ ခိုင်းနှိုင်းသည့် ကာလနဂါးတမျိုးသာ ဖြစ်ပေသည်။ နဂါးကို ဘယ်ကောင်မလေး ယူဝံ့သလဲ.... သူသည် ဂိမ်းမာစတာ တယောက်လဲ ဖြစ်ပေသည်။ သူမပါသော အဖွဲ့သည် ရှုံးသည်က များပေသည်။ သူမဆော့ဘူးတဲ့ ဂိမ်းမရှိသလောက်ပင် များလှပေသည်... သူသည် ဂိမ်းထဲတွင် အသတ်ခံရသည် များပါကလဲ ဒေါသထွက်တတ်ကြောင်း ကျနော် အရင်တပတ်လောက်ကမှ သိခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ အဟေးးး သူသည် မူးနေလျှင် စကားမပြော ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ နေတတ်ပါသည်။
ထိုဂေဟာလေးထဲတွင် မိသားစုကို ခင်တွယ်တတ်သော ညီငယ်တယောက် ရှိနေပါသေးသည်။ သူသည် အဝေးကနေ လာသည် မလာသည်ကများ၏ သူ့အကြောင်းကတော့ သူလဲ လီချိန်လွဲသာ ဖြစ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော သူသည် စင်ကာပူတွင် နာမည်ကြီးနေသော မြန်မာမော်ဒယ်မလေးကို ချစ်နေပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ပြောခွင့်ရယ်မကြုံ လင်ယူလို့ ကလေးသာ မွေးတော့မည် ခုထိ သူ့အပြောက မချသေးပါ... သူသည် မိသားစုကို ဖုန်းခေါ်သလိုနဲ့ သူ့အမကြီး သူ့ကောင်လေးဆီ ခေါ်ရန် သိမ်းထားသော နိုင်ငံခြားခေါ်များကို သူ့မန်းတလေးက ကောင်မလေးလိုလို ဘာလိုလို ညာလိုလိုကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ဖြုန်းတီးတတ်ပါသည်။ သူသည် အိမ်ရောက်လာလျှင် ပလီတတ်ပါသည်။ ကျနော် ချစ်သူ့ကိုလဲ စတတ်ပါသည်။ သူကြောင့် ကျနော့်ချစ်ရသူမှာ လူစင်စစ်မှ ကြောင်မလေးဘ၀သို့ ခဏတာ ရောက်ခဲ့ဖူးပါသည်။
သောကြာနေ့ဆို ကျနော်နဲ့ သိပ်မခြား နောက်ရောက်လာတော့ ညီတယောက် ရှိနေပါသေးသည်။ သူသည် စကားသိပ်မပြော ပြုံးပြုံးသာ နေတတ်ပေသည်။ သူသည်လဲ ကျနော်ထင်သည် ဂိမ်းဆော့သည် ဆိုသည်ထက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစုလေးနဲ့ နေရသည် ပလီပလာ လုပ်ချင်သည်က ပိုများနေပေမည်။ သူသည် တခါတလေ အပျင်းကြီးတတ်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေတောင် အိမ်မပြန် အလုပ်သွားလျှင်တောင်မှ အ၀တ်မလဲပဲ သွားတတ်ပါသည်။ သူသည် အပေါ်က အကိုတွေ မြှောက်ပေးလို့ LAN ဂိမ်းဆော့ရာမှ အားမရသဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် တက်၍ တပည့်ခံကာ ဆော့နေကြောင်း ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်မှ သတင်းရရှိထားပါသည်။ သို့ပေသိ သူသည် ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ သူသည် အရက်သေစာ မသောက်သော ဘုရားဒကာ တယောက် ဖြစ်ပေသည်။
ထိုအိမ်ထဲသို့ ရောက်လာရာ အကြောင်းများစွာထဲတွင် တအိမ်လုံး ဝိုင်းချစ်ကြသော ညီမတစ်ယောက် ရှိသေးသည်။ စိတ်သဘောထား ဖြူစင်သလောက် ဒေါသလဲ ကြီးတတ်ပါသည်။ ဒေါသလဲ ပျောက်တာ မြန်လှပါသည် (ပြန်ချုပ်မှ မဟုတ်ရင်) သူသည် ယခုတလော အလုပ်များနေတတ်ပေသည်။ ပတ်တိုင်း အလုပ်သွားလိုက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်နဲ့ အလုပ်များစွာကို တယောက်ထဲ လုပ်နေတတ်ပေသည်။ သူ့ဆီက ပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့ အသံ တခါမှ ကျနော် မကြားဖူးပေ ဂုဏ်ယူလှပေသည်။ သူသည် အားလုံးကြိုက်တတ်သော အရာများကို နားလည်ပေသည်။ အားလုံးအပေါ်တွင်လဲ အလွန်မှ သံယောဇဉ် ကြီးပါသည်။ ကျနော် တခါတလေ ဒေါသထွက်လို့ ပြောမိရင်လဲ စိတ်မဆိုးတတ်ပါ။ ဆွဲတော့ ဆိတ်တတ်ပါသည်။ ကျနော် ယခု အသားဖြူအောင် လုပ်နေပါသည်။ ဒါမှ သူ့ဆွဲဆိတ်သော အရာများကို မြင်ရပေမည်။ ထိုခါမှ သူ့၏ မောင်နှမများက ကျနော့် အပြော ယုံပေလိမ့်မည်။း)
ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ကျနော်တို့သည် အရင်ဘ၀က ပြုခဲ့သော ရေစက်ကြောင့် ယခုလို ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နေကြရခြင်းသာ ဖြစ်ပေမည်။ ကျနော်တို့ အရင်က ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးသည် ယခုဆို ကျနော်တို့ အရင်ကလောက် သာယာမှုတွေ မရှိတော့သာ အမှန်ပင်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖေးမကူညီစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက် သွားနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ကျနော်တို့ ညီအကို မောင်နှမစိတ်ဓါတ်နဲ့ တသက်လုံး ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းသွားကြဦးမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ကျနော်သည် ဂိမ်းမက်သူမဟုတ် မိသားစုအရသာကို ငတ်နေသော အဝေးရောက် သားတယောက် သာ ဖြစ်ပေသည်.. ထိုကြောင့် ကျနော်သည် မိသားစုနဲ့ တူသော ထိုအိမ်လေးကို ရောက်နေဦးမည်သာ ဖြစ်ပေသည်.......
နေမကောင်းလို့ ဆေးခွင့်ယူခြင်း မဟုတ်ပါ။
တစ်ရက်ကို ကိုးနာရီ အနည်းဆုံး (မနားတမ်း) အလုပ် လုပ်ရသော ရုံးကို တစ်ရက်တာမျှ ပစ်ကာ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပလိုက်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အပါတ်တိုင်း ဆေးခွင့်ယူလေ့ရှိသော ညီမ ရုံးမသွားခင် အမှီထပြီး ဆေးခွင့်ယူမည့်အကြောင်း ကြွားလိုက်သေးသည်။ ဘုတ်အီးကပါ `ညီမလည်း MC´ ဟု မပြောတာ တော်သေး၏။ သူက ဒီတနင်္လာမှာ ဆေးခွင့်ယူထားပြီးဘီ...။ `ခောတ်မီစွာ အိမ်စီ ယူထားသည်။ ကော်ဖီလေးသောက်၊ သီချင်းလေး နားထောင်ရင်း ဒီလို နံနက်ခင်းမှာ အိပ်ယာထဲ ဇိမ်ကလေးနှင့် နားနားနေနေ နှပ်နေရသည်မှာ အရသာရှိလေစွ။
´ အိမ်မှာ အေးအေးလူလူ၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နားနေခိုက် ကျန်သည့်သူများ ကျောင်းမှာ စာသွားသင်ရ၊ အလုပ်မှာ ပင်ပန်းနေရတာ တွေးပြီး စိတ်မကောင်းလေသောကြောင့် ဂျီတော့မှာ ထိုစာလေးကို တင်ထားလိုက်သည်။
`ဟွန့်၊ ကြည့်လို့ကိုမရဘူး´ ရုံးရောက်လို့မှ အလုပ်မလုပ်ရသေး၊ ကျွန်တော်တင်ထားသောစာကြောင့် ထွက်လာသော ချီးပေါက်သံတွေ နောက်မှာ.. တကယ် မနာမလိုကြမှန်း၊ အမြင်မကတ်ကြမှန်း ကျွန်တော် သိနေခဲ့ပြီ..။
ရုံးတက်နေရသော ကျန်မောင်နှမတွေ တစ်နေကုန် ကလိကလိဖြစ်အောင် ဂျီတော့ကနေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဘာတွေကြွားရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတုန်း
စားဖိုမှူးက ရုံးမသွားတာ သိသိချင်း ချီးစပေါက်လေပြီ။
`အိမ်မှာ အလကား နေမနေနဲ့၊ အိပ်ယာခင်းတွေလျှော်ထား၊ အိပ်ယာခင်း အသစ်လဲပြီး အခန်းရှင်းထား´
`တိန်´ (စိတ်ထဲမှာ စားဖိုမှူး ခေါင်းကို တူနှင့် ထုပလိုက်သည်)
စားဖိုမှူးက ရေချိုးကာ ကျောင်းသွားဖို့ အလှပြင်နေသည်မှာ ဆယ့်ငါးမိနစ်မက ရှိပြီ။ ဘုတ်အီးကတော့ ဒီအချိန်ဆို ရုံးရောက်နေလောက်ရောပေါ့။ ညီလေးဗလ နိုးပြီ။ ရေချိုး၊ အ၀တ်လဲ တာ ငါးမိနစ်အမြန်ဖြစ်အောင် ဘယ်သို့လေ့ကျင့်ထားလေသည်မသိ။
စားဖိုမှူးတောင် ကျောင်းမသွားရသေးခင် သူက အလုပ်သွားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်လို့နေပြီ။
မနက် ဂစ်တာ ထ မတီးပုံထောက်လျှင်တော့ သူ စိတ်ကြည်ပုံရလေသည်။
ခုတလော သူက ဗလအားကိုးနှင့် သူ့ ရုံးက သူဋ္ဌေး ကိုရော၊ မန်နေဂျာကိုရော အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပါမကျန် ပတ်ပြီး ရန်ဖြစ်နေ၏။ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဖိလုပ်ပြီး ဗလ ပိုကြီးလာအောင် ကြိုးစားနေတာ ဒါကြောင့်ကိုးဟု သဘောပေါက်သွားပြီ။
`ဒီတစ်နေ့လုံး ထမင်း မစားရသေးဘူး´ အမြဲပြောသော ညီ အတာ တစ်ယောက်ကတော့ နှိုးစက်သာ အသံပြာချင် ပြာလာမည်။ အိပ်ယာကနေ မထသေး။ သွားနှိုးပြန်တော့ `ဇိမ်ပျက်တယ်၊ ခဏလောက် နှပ်ပါရစေ´ ဟု နှုတ်ခမ်းကို တတောင်လောက် ချွန်ကာ စိတ်မရှည်စွာ ပြော၏။
သို့သော် အိပ်ယာကမထ။ ဒီလိုနဲ့ ရုံးနောက်ကျလို့ ကားငှားစီးရပေါင်း များသော်လည်း သူက မနက်တိုင်း နှပ်မြဲ။ ဘုတ်အီးက အလာမ်းပိတ်ပြန်အိပ်သော်လည်း နောက်ဆုံးချိန်မှာ လူးလဲထနိုင်သေးသည်။ ဒီညီကတော့ အလာမ်းသာ ဆယ့်ငါးမိနစ်ခြား တခါ တစ်အိမ်လုံး ဆူညံချင်ညံမည်။ အိပ်ယာက မထတမ်း ရုံးနောက်ကျခံကာ နှပ်သည်။
မနေ့ညက လူဇိုးမဂျီး သန်းခေါင်ကျော်မှ အလုပ်က ပြန်လာရလို့ ပင်ပန်းနေပြီလား။ ဒီနေ့ သူ ကျောင်းရှိလျှင်တော့ အတန်းချိန် အမှီ နှိုးရအုံးမည်။
စာဖိုမှူး ကျောင်းသွားပြီ။ အိမ်ကမထွက်မချင်း မှာစရာတွေ အထပ်ထပ်ကို ပြောလို့မပြီး..။ သူကျောင်းသွားပြီးသိပ်မကြာ။
အိပ်ယာထဲမှာ နှပ်နေသော အတာ ဖုန်းလာလို့ ဖုန်းဖြေသည်။
ကောင်မလေးများ ဖုန်းဆက်လာသလား ပျော်ကာ မျက်လုံးပြူးသွားဟန် ရှိ၏။ အမှန်တော့ ရုံးက ဖုန်းဆက်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
`ရုံး မသွားသေးဘူးလား´ အတာ ရေသွားချိုးနေတုန်း ခေါင်းစုတ်ဖွား၊ အိပ်မှုန်စုံမွှားနှင့် တံခါးဝမှာ လာမေးသူက လူဇိုးမဂျီး။ သူ့ခမျာ ကျောင်းတဖက်၊ အလုပ်တဖက်နှင့် ပင်ပန်းကာ အနည်းငယ်ပင် ပိန်သွားသည်ပင် ထင်ရ၏။
`ဒီနေ့ ကျောင်း မသွားရဘူးလား´
`အိုင်က နေ့လည်မှ သွားရမှာ´ ဟု ပြန်ဖြေကာ သူ့အခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားသည်။
မနက် စောစောထကာ အလုပ်လျှောက်ဖို့ ကြိုးစားရအုံးမည်လေ..။
တစ်နေကွယ်လို့ တစ်မိုးသောက်ခဲ့ပြီ လွမ်းရက်ရှည်မှာ လွမ်းမျက်ရည် တစ်စို့စို့နဲ့ ထားခဲ့တာလည်းမဟုတ် သွားပါလို့လည်းမပြော အိပ်မက်ရှည်ကြားထဲ အိပ်ပျက်ဖန်မျက်လုံးတွေက ဆွေးလို့ပဲ ငိုငို ငိုလို့ပဲ လွမ်းလွမ်း ငဲ့သနားသောအားနဲ့ လှမ်းလှည့်က ပြန်လာခဲ့ပါလို့ နွမ်းငယ်တဲ့ ဘ၀င်နှလုံးရယ်က သဲငယ်ရယ် ပြန်လာမယ့်လမ်းဆီသို့ တစ်နေလည်း ကွယ်ပြန်ပြီ တစ်မိုးလည်း သောက်ခဲ့ပြန်ပြီကော.......
အသည်းကွဲ စိုင်းစိုင်းက အလုပ်မသွားခင် သူ့ကဗျာလေး ဂျီတော့ကနေ ပို့ကာ ဘာမှ ပြန်မပြောရသေးခင် ပျောက်သွား၏။
သူလည်း ဒီနေ့တော့ နေ့ဆိုင်း ဆင်းရမည်ထင်သည်။ `ချစ်သူနှင့် ခဏ ခွဲနေရတာ အသည်းကွဲကဗျာတွေ အမြတ်ထွက်လာတယ်´
ဟု ပြောဆို ရယ်မောနိုင်သည့် နေ့တနေ့ကို ရောက်စေချင်လှပြီ။
မဟုတ်ပါက `ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ချစ်သူ့မျက်နှာလေးပဲ မြင်ယောင်နေ၊ သတိရနေတယ်´ ပြောပြောနေတော့.. သူမောင်းသည့်ကားမှာ သိပ်စိတ်ချရမည့်ပုံ မပေါ်။ `သေချာရတယ်နော်´ စိုင်းစိုင်း
ကားမောင်းသည့် အကြောင်း တွေးနေတုန်းမှာ ညီတော်မောင် တီတီက ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် မေးတော့ ဘာ သေချာရမှန်း ချက်ချင်း သဘောမပေါက်။ ပြီးတော့မှ မနေ့က ဖုန်းဆက်ပြောထားသော အကြောင်းကို သတိရပြီး ရတယ် ပြန်ဖြေရသည်။ ဒီလိုဆိုလျှင်တော့ တီတီ ဘယ်နေ့လာမှာလဲ မေးဖို့၊ မျှော်ဖို့ မလိုတော့ချေ။
တီတီ ဆိုမှ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀တုန်းက ကားမောင်းတမ်းဆော့တိုင်း ဟစ်ခဲ့ဖူးသော... တီတီ ပေါ်ပေါ်... ကို အောက်မေ့ကာ ပေါ်ပေါ့်ကို အမှတ်ရသည်။
ဥပုဒ်လထဲမှာ ဒီညီတော်မောင်လဲ ပင်ပန်းနေလောက်ပြီ။ စားချိန်တန်မစားရသည့်အထဲမှာ အိပ်ချိန်တန် မအိပ်နိုင်တာကြောင့်လားမသိ..။ လူက ပါးချောင်နဲနဲ ကျချင်နေပြီ။ အလုပ်သစ်မှာရော အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါလေစ။ အလုပ်မှာ ဗျာများနေသော သူ့ကို ဒိုတာခုတ်တုန်းကလိုမျိုး အလုပ်တွေ လမ်းကြောင်းရှင်းပေး၊ ခွန်အားဖြည့်ပေးလို့ ရလျှင် ကောင်းပါလိမ့်မည်။
တဆက်တည်းနှင့် အလုပ်မှာ တစ်ရက်တစ်ကျပ် လစာတိုးလေသော၊ တီတီတာတာစကားဆိုတတ်သော ကျေးတမာကို သတိရသည်။ ထို ငှက် ကျေးတမာသည် အတောင်လဲ မပါသလို ပျံတတ်ပုံလဲ မရပါ။
အထွေးဆုံးသော ညီ အငယ်ဆုံးမို့ အလိုလိုက်တာ၊ ဦးစားပေတာ ခံရလျှင် အင်မတန် ကျေနပ်တတ်သည်။ သို့သော် ဒိုတာများ ခုတ်နေရလျှင် အကိုတွေကို ချွဲဖို့ သူ သတိမရတတ်သလို သူ၏ မန်ဒါလီတွေ ဘာတွေကိုလဲ သူ..မေ့လေပြီ။ နီမနေ၊ စိမ်းမနေသော သူ့ ဂျီတော့ကို လှမ်းခေါ်တော့ ဘာမှ ပြန်မလာ။ အလုပ်ထဲ မရောက်သေးဘူးလား..။
ညက အအိပ်နောက်ကျပြီး မနက်မထနိုင်လို့ အလုပ် မသွားနိုင်ပြန်ပေဘူးလား..။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အလျှိုလျှို သွားခဲ့ကြတော့ အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့မှာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ ပျင်းလာပြန်သည်။ ဒီတော့ ဘာလုပ်ရရင် ကောင်းမလဲ အကြံထုတ်ရပြီ။ ကြက်သားနဲ့ အာလူးပူရီ လုပ်စားရရင် ကောင်းလေမလား။ ဒီိမောင်နှမတွေ စားတတ်ကြရဲ့လား။ ကြိုက်ကြရဲ့လား..။
မုန့်လုပ်စားမည် တွေးမိပြန်တော့ အစားမက်သော ညီမ မူသေကို လွမ်းရပြန်၏။ အိမ်ဘက် ရောက်မလာပဲ ပျောက်နေသည်မှာ တစ်လပင် မကတော့ဘူးလား မသိ။
ညီမျိုးနှင့် လျှောက်လည်နေသည်လား။ အားကစားတွေလုပ်ပြီး ပင်ပန်းနေလေပြီလား..။ စကားသိပ်မပြောသလောက် တစ်ခွန်းပြောလိုက်လျှင် ထိုတစ်ခွန်းတည်းနှင့်ပင် လုံလောက်စွာ ချုပ်တတ်လေသော ညီမျိုးနှင့် မဲတူ အဲလေ မူသေတို့ကိုလည်း မုန့်လုပ်စားလေတိုင်း၊ တခါတလေ.. ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိပါပဲ သတိရလို့ နေမိတတ်ပြန်သည်။
အရပ်ရှည်ရှည်နှင့်ညီမ၊ ၀ိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးနှင့် ညီမကိုလဲ မကြာခဏ ကျွန်တော် သတိရတတ်သော်လည်း ဆုံဖြစ်ကြဖို့ မကြိုးစားမိတတ်ပါ။ အလုပ်များလေသော၊ အလုပ်ဝန်ဖိစီးမှုတွေ များလေသော ခောတ်ကာလကြီးထဲမှာ လူတစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုသည်မှာ အဖိုးတို့ ခောတ်၊ အဖေတို့ခောတ်ကလောက် မလွယ်ကူတော့။
တစ်အိမ်တည်းမှာ အတူနေပြီး အခန်းမတူရုံမျှနှင့်ပင် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မတွေ့ဖြစ်ကြသော နေ့ရက်တွေ ရှိနေကြသည်ပဲ။ ကံကြမ္မာ ရေစက် ဆုံလေချိန်မှာ တစ်မိုးတည်းအောက် အတူရှိနေကြချိန်လေးတွေကို ကျွန်တော် အင်မတန် တန်ဖိုးထားသည်။ အတိတ်သည် စိတ်ကူးနှင့်သာ ပြန်လျှောက်လို့ ရသောလမ်း ဖြစ်ပြီး ပြန်လိုချင်တိုင်း ရနိုင်သည် မဟုတ်။ အနာဂါတ်သည် မျှော်မှန်းဆနိုင်ခွင့်နှင့် ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ခွင့်သာ ရှိ၏။ ကိုယ် သေသေချာချာ မပိုင်။ လက်ရှိ ပစ္စုပန်သည်သာ ကိုယ် သေချာစွာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်သော အရာမဟုတ်လား။
ဒီတော့ ခုလို နေ့ရက်၊ အချိန်လေးများကို ကျွန်တော် တန်ဖိုး အထားနိုင်ဆုံး ထားသည်။ အိမ်ရှေ့ ထမင်းစားပွဲက မှန် ကွဲကြေသွားခဲ့ဖူးပြီးပြီ။ တစ်စစီ မွကြွေသွားသော မှန်ချပ် အပိုင်းအစများသည် ကောင်းမွန်သော မှန်တစ်ချပ် ပြန်ဖြစ်မလာနိုင်တော့သောအခါ အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်သွား၏။ မှန်အသစ်တစ်ချပ် ထပ်ဝယ်ဖြစ်ဖို့ အကျိုးအကြောင်းကလည်း ခုချိန်ထိ မတိုက်ဆိုင်နိုင်သေးပါ။ ထမင်းစားပွဲ မှန်သည် အသစ်ပြန်လဲလျှင်ရနိုင်သည်။ သံယောဇဉ်နှင့် မေတ္တာတရားသည် ကျိုးပဲ့သွားပါက... မွကြေသွားပါက... အသစ်ပြန် တပ်ဆင်နိုင်သည်လား မတပ်ဆင်နိုင်ဘူးလား ကျွန်တော် သေချာမသိပါ။ ညီထွေးလေးက အဆို တင်သွင်းလာ၏။
တဲ့...။ မှန် ချင်း တူကြသော်လည်း မှန်လို ကွဲကြေတတ်သော သံယောဇဉ်နှင့် မေတ္တာတရားကို ထားမိပါက အခန့်မသင့်လျှင် ကွဲကြေနိုင်သည်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး အခန့်မသင့်လျှင် ထိရှ ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။ မှန်ကန်သော သံယောဇဉ်နှင့် မေတ္တာတရားကိုသာ ထားနိုင်လျှင်တော့ အေးလျှင်လည်း အတူ၊ ပူလျှင်လည်းအမျှ.ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြမည်။
ကျွန်တော့် မောင်နှမတွေ အားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းသော ရိပ်မြုံလေး တစ်ခုသာ ဖန်တီး တည်ဆောက်ပေးလိုသည်။ ကိုယ်တိုင်က ချမ်းသာသူ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ မဖြစ်လိုလှပဲ အေးအေးဆေးဆေး၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေး နေ နေ ရလျှင် ကျေနပ်နေသော်လည်း သူတို့လေးတွေကိုတော့ ဘ၀မှာ အောင်မြင် ထင်ရှား ကျော်ကြားသူတွေ အဖြစ် မြင်ချင်သည်။ တစ်မိုးတည်းအောက် အတူ ဆုံဖြစ်၊ နေဖြစ်ကြချိန်မှာ နွေးထွေးသော မိသားစုရိပ်မြုံလေး ထဲ လုံခြုံ ပျော်ရွှင်စေချင်လွန်းလှသည်။ ထိုအခါ အကြီးဆုံးသော အကိုကြီး ကျွန်တော်သည် အကိုကြီးတစ်ယောက် ပီသစွာ သူတို့လေးတွေကို စောင့်ရှောက်နိုင်ပါရဲ့လား အတွေးတချို့ မကြာမဏ ၀င်တတ်သည်။ သူတို့လေးတွေ မပျော်ရွှင်မှာ၊ အဆင်မပြေမှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျသည်။
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ မှတ်တိုင်လေးတွေ စိုက်ထူခဲ့သည် ဆိုပါစို့။ သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီသည် ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲမှ အစိတ်အပိုင်းလေးများ ဖြစ်ကြသည်။ ထို အစိတ်အပိုင်းလေးများသည် ဘ၀၏ နာမ်ခန္ဒာကို ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝစေ၏။ သူတို့လေးတွေသည် အေးအတူ၊ ပူအမျှ ဆိုသော ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ခုချိန်မှာ အတူ ရင်ဆိုင်နေကြသော ဘ၀ခရီးသွား မိတ်ဆွေကောင်းများလည်း ဖြစ်ကြ၏။
Writer Sein Lyan Time 4:35 am
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, ကျနော့်အကြိုက်, ခံစားချက်သက်သက်, အမှတ်တရ
တာ ဦးစိန်လက်ချက်ကိုး.... ဟီး
သံလွင်....ရှာကြည့်ပါ ရှာကြည့်ပါ အဲ့လိုစားပွဲမျိုး...:D
အသစ် တင်ပါဗျို့.. ဇော်ဝင်းထွဋ္ဋ် တို့လို့ အဟောင်းတွေ ပြန်မထုတ်နဲ့...
လာဖတ်သွားတယ်။ အကြာကြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ :D
သီးချင်းသစ်တွေရေးပါ.. အဟောင်းကြီးတော့မလုပ်နဲ့ အားလုံးကသိတယ်..လိုချင်တာအသစ်.. တခုခုတော့ပေးပါ..
ကိုဖိုးစိန်ဆီက တက်လာတဲ့ ပို့စ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင်
စင်ကာပူရောက်ပြီးကတည်းက စင်ကာပူက အကြောင်းတွေ
နဲ့ မကင်းသေဘူး။ မကင်းတာထက် တစ်ခါလာလည်း
ဒီလူ အကြောင်း ဟိုလူ့အကြောင်းတွေကြီးပဲ ထပ်နေတယ်။
အကိုဆီမှာ ကျနော် ဖတ်ဖူးတဲ့ စိတ်ကူးဇာတ်လမ်းတွေ
ကျွန်တော်တော့ အဲ့အသိုက်လေးကို သဘောကျတယ်..။
ကွဲကျသွားသော ထမင်းစားပွဲမှန်သည် ပို၍ ချွန်မြသည်......